‘लगानीकर्ताको प्रतीक्षाको घडी सकिँदै छ’ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता ‘लगानीकर्ताको प्रतीक्षाको घडी सकिँदै छ’
on: January 21, 2019 अन्तरवार्ता
‘लगानीकर्ताको प्रतीक्षाको घडी सकिँदै छ’
टेकबहादुर बोहोरा, अध्यक्ष, मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
नेपाली वित्तीय बजारमा लघुवित्त संस्थाहरूको हिस्सा संख्यात्मक रूपमा बढी छ । साथै, उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेख्य मद्दत पुर्‍याउँदै आएका छन् । विशेषगरी लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गरेका छन् । र, त्यहाँ भएको पूँजीलाई संकलन गरेर तरलताको वृद्धि गर्ने काममा पनि टेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । साथै, लघु उद्यमहरूको उत्थान, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै उद्यमशीलता विकासमा लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिका रहेको छ ।
बनेपास्थित मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न योगदान दिँदै आएको छ । उक्त संस्थाले सातै प्रदेशअन्तर्गतका २५ जिल्लामा ५६ ओटा शाखा स्थापना गरी वित्तीय पहुँच विस्तार गरेको छ । साथै, कम्पनी स्थापनाको छोटो समयमै चुक्तापूँजी रू. १० करोड ३८ लाख पुर्‍याउन सफल भएको छ । प्रस्तुत छ, उक्त संस्थाका अध्यक्ष टेकबहादुर बोहोरासँग लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यलगायत विविध विषयमा आर्थिक अभियान दैनिकले गरेको कुराकानीको अंश :
नेपालको अर्थतन्त्रको विगतको अवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?
१९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भएपछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा आर्थिक क्रान्तिको शुरूआत भएको हो । यद्यपि, उचित वित्त व्यवस्था नहँुदा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेन । त्यस बेला लघु उद्यमहरूले विभिन्न सम्मस्या झेलेर भए पनि राष्ट्रिय जीवनशैलीलाई मर्न दिएनन् । तर, राज्यले कुनै प्रोत्साहन नगर्दा त्यस्ता उद्यम आधुनिकीकरणलर्फ जान सकेनन् । र, विश्वले आर्थिक क्रान्ति गरेर उत्कर्षमा पुगिसक्दा पनि नेपालले भने पञ्चायतकालीन धर्मभकारी थापेर शंखेकिराको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता रह्यो ।
तर, २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रले केही स्वतन्त्रता पायो । पञ्चायतकालको एकात्मक शासन प्रणालीले थुनेर राखेको अर्थतन्त्रले अहिले जति उपलब्धि गरेको छ, त्यो अन्तरराष्ट्रिय जगतको तुलनामा सामान्य नै हो । र, हामीले बुझेको पनि त्यही हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति तपाईको बुझाइ के छ ?
राष्ट्र बैंकले लामो समय मुद्रा डिजाइन र छपाइमा मात्र सीमित हुनुपर्‍यो । साथै, शासकवर्गको इच्छाअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । तर, २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसपछि मात्र नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एक स्वशासित नियामक निकाय ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’को उदय भएको हो ।
तर, नियमन व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि वित्तीय क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन सकेन । आम मानिसमा ठूलाठूला व्यापारीका लागि मात्र बैंक खोलिएको भन्ने थियो । उक्त अवस्थामा वित्तीय साक्षरताको विकास हुन सकेन ।
पछि २०५५ सालमा वित्तीय मध्यस्थता ऐनको व्यवस्था भएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधारोन्मुख हुँदै गयो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०५८ को संशोधनपछि बैंक तथा वित्त संस्थाले आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने अवसर हासिल गरेका हुन् ।
खासमा केन्द्रीय बैंक देशकै अर्थ व्यवस्थाको नीति निर्माता, नियामक र नियन्त्रणकारी निकाय हो । साथै, राज्यको आर्थिक अवस्था निर्धारणमा नेपाल सरकारको प्रमुख सहजकर्ता निकाय पनि हो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको क्षेत्रमा अत्यन्त लचकता अपनाएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृतसँगै नराम्रो गर्नेलाई दण्ड पनि दिँदै आएको छ । हामी पनि राष्ट्र बैंकले देखाएको मार्गमै हिँडिरहेका छौं । गरिबी निवारणको लक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले दर्शाएको अभिभावकत्व प्रति हामी ऋणी छांै ।
वास्तवमा मेरो यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य नै थिएन । यद्यपि, म २०५० सालदेखि नै विभिन्न वित्तीय कम्पनीमा आबद्ध थिएँ । त्यस बेलादेखि सहकार्य गर्दै समकालीन साथीहरूले २०६४ सालमा एउटा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यसबेला म व्यक्तिगत कार्यमा व्यस्त भएकाले सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने सहमति भयो । शुरूमा विकास बैंक खोल्ने सहमति भए पनि पछि लघुवित्त बैंक खोल्यौंं । शुरूमा म संस्थापक लगानीकर्ताको भूमिकामा मात्र थिएँ । त्यसको १ वर्षपछि मैले संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएँ । तत्कालीन अवस्थामा संस्थाका वित्तीय परिसूचकहरू एकदमै कमजोर थिए । त्यसलाई समाधान गरेर संस्थालाई माथि उठाउने चुनौती ममा थियो । त्यही शिलशिलामा म हालसम्म यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेको छु ।
मिर्मिरेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा धेरै व्यक्ति आए पनि लामो समयसम्म टिक्न नसक्नुको कारण ?
संस्थाको सुशासनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिवार्य रूपमा हुनपर्छ । हामीले हालसम्म ७ जना सीईओ राखिसक्यौं । तर, यो हाम्रो बाध्यता हो, रहरले गरेका होइनौं । २ वर्षका लागि नियुक्त गरेको व्यक्ति ६ महीनामा नै अर्को संस्थामा जान्छन् । संस्थाको हैसियत अनुसार सेवासुविधा पनि प्रदान गरेकै छांै । तर, उनीहरू मिर्मिरेलाई भ¥याङ बनाएर अन्य ठूला कम्पनीमा गए । कोही काम गर्न नसकेर गए । यसमा संस्थाको कमजोरी छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपि, पद रिक्त हुनेबित्तिकै नयाँ ल्याउने गर्दा पनि दक्ष जनशक्ति छान्न सकिएन । जसले गर्दा पनि यस्तो समस्या भएको हुनसक्छ । यसतर्फ हामी गम्भीर भएका छौं ।
लघुवित्त संस्थाहरू बजारकेन्द्रित भए भन्ने आरोप छ, यसप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?
लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर उठाउनु हो । विगतको तुलनामा पछिल्लो समय शहरमा पनि विपन्न वर्गको संख्या बढ्दै गएको छ । उनीहरूलाई ठूला बैंकले ऋण दिन पत्याउँदैनन् । जुन समस्या राज्यलाई नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जसअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा जस्तै शहरमा पनि लघुकर्जा आवश्यकता बढ्दै गएको छ । त्यसैले शहरकेन्द्रित हुनुपर्ने एक बाध्यता पनि हो । यद्यपि, यसलाई शहरदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । भर्खर दुर्गम ठाउँमा गएर पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पूर्वाधारको विकास भएको छैन । तर, त्यही ठाउँमा लघुवित्तको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक छ । अब, राज्यले यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
पटकपटकको पूँजी वृद्धि योजनाअनुसार लगानीकर्ताले कहिलेसम्म लगानी मात्रै गरिराख्ने ? लगानीकर्ताले नगद लाभांश कहिले पाउँछन् ? लगानीकर्तालाई के भन्नुहुन्छ ?
कुनै पनि संस्थाको लगानीकर्ता पहिले लक्षित वर्गको सेवा गर्न इच्छुक हुन आवश्यक छ । हामी अहिले लक्षित वर्गलाई सेवा गर्दै छौं । विपन्न वर्गलाई आत्मनिर्भर तुल्याउँछौं, जुन संस्थासँगै लगानीकर्ताको कर्तव्य पनि हो । यद्यपि, हामी लगानीकर्तालाई समयानुकूल प्रतिफल दिन प्रयत्नशील छौं । हरेक वर्ष लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल दिन खोजिएको छ । नगद नभए पनि हकप्रद र बोनस शेयर प्रदान गर्दै आएका छौं । यद्यपि, अब लगानीकर्ताको प्रतीक्षाको घडी पनि सकिन लागेको छ । हामी छिट्टै नै नगद लाभांश पनि वितरण गर्नेछौं । लगानीकर्तालाई ढुक्क रहन अनुरोध गर्दछु ।
अबको दिनमा वित्त व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती छ भन्छन्, यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
राज्यले विकास बजेट राम्ररी खर्चेर उल्लेखनीय दरमा सार्वजनिक व्यय वृद्धि नगरेसम्म यस्तो समस्याको समाधान सहज रूपमा सम्भव देखिँदैन । लघुवित्त कम्पनीको हकमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप स्वीकार तथा परिचालन गर्ने थप व्यवस्था नगरेसम्म यो समस्या कायम रहने देखिन्छ । यद्यपि, वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा गर्ने कर्जा लगानीको प्रतिशत अहिलेकै स्थितिमा रह्यो भने पनि त्यति असजिलो हुन्न ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि कोष व्यवस्थापनको नीति अलि सहज बनाइदिने हो भने पनि लगभग ७० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । किनकि खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाले मुख्य रूपमा थोकवाला वा वाणिज्य बैंकहरूसँग साझेदारी गर्ने हो । यस्तै, राज्यले वैदेशिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि लघुवित्त उन्मुख तुल्याउन सहजीकरण गरिदिने हो भने वित्त व्यवस्थापनमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
हाल बजारमा लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जर र एक्विजिसनको पनि चर्चा छ । यस विषयमा तपाईंहरूले कस्तो सोच बनाउनुभएको छ ?
गत पुस २१ गते सम्पन्न आठौं वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिलाई मर्जर र एक्विजिसनमा लैजान अख्तियारी प्रदान गरेको छ । साथै, यस मर्जरको विषयमा अन्य लघुवित्त संस्थासँग पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेकै छ । एकै कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूको हकमा राष्ट्र बैंकले एकल कर्जा सीमा, कर्जा मिलानजस्ता विषयमा विशेष व्यवस्था नगरेसम्म यो गाह्रो हुने देखिन्छ ।
साथै, नेपालमा अहिलेसम्म लघुवित्त मर्जर भएको इतिहास छैन । यद्यपि, संख्याको हिसाबले लघुवित्त संस्थाको मर्जर र एक्विजिसनको विकल्प पनि छैन । जसअनुसार मौद्रिक नीतिको अब आउने समीक्षामा लघुवित्तको पूँजी संरचनामा वा राशिमा हेरफेर भए यस विषयमा छलफल हुन सक्छ ।
अन्त्यमा सेवाग्राहीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
मिर्मिरे सदैव सेवाग्राहीको हितका लागि क्रियाशील रहनेछ । सेवाग्राहीका सद्भावना र लगनशीलताले हामीलाई संस्थाको स्तरोन्नति गर्न प्रेरणा प्राप्त भएको छ । मिर्मिरेले अपनाएको ‘एक व्यक्ति : एक लघुवित्त सदस्य’ को सिद्धान्तमा अडिग रही सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु । हरेक व्यक्तिको घरदैलोमा मिर्मिरेले सेवा पुर्‍याउनेछ । सेवाको पूर्ण सदुपयोग गरी आआफ्नो आर्थिक स्तर वृद्धिका लागि क्रियाशील हुनुहुन्छ र सदैव लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौं ।